မြန်မာနိုင်ငံအတွက် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ) (ခမောက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြန်မာနိုင်ငံအတွက် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ) (ခမောက်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ) (ခမောက်)
Posted by mG on Oct 29, 2010 in News | 20 comments
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် မဲဆန္ဒပေးပွဲတွင် ခမောက်ပါတီ နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းပါတီ တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်တို့ရေ။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့ကိုမဲပေးမလည်း။ ???????????????????????? (T) (or) (F)
ကြံ့ခိုင်ရေးတွေကလည်း သူတို့ဘက်ကို မဲထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် (ရင်းနည်းသူတွေ၊ဆိုင်သူ၊ပိုင်သူ၊မိတ်ဆွေ၊ငြင်းဆိုသူ) ရန်ကုန်တွင် 5000 ကျပ် ၊ နယ်ဝေးဒေသများတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးကို မဲပေးလျှင် 40,000 ကျပ် ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာလည်း တတ်နိုင်တဲ့ မဲယူနည်းပါပဲ။
စပါးနှံတံဆိပ် ကလည်း မဲတွေကို အလူးအလည်းရအောင်လုပ်နေကြပါပြီ။အားသာချက်ကတော့ စပါးနှံအဖွဲ့မှာကြံ့ဖွံ့နဲ့မတူ ပညာရှင်တွေတာ ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း တွေ့နေရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပညာအရည်အချင်းနဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေပါပဲ။
မြန်မာ့မဲပေးပွဲကို မဲမပေးလည်းနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အန်တီစုရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ဒီမိုကရေစီ ဥပဒေလမ်းစဉ်နှင့် မဲဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေများတွင် အခိုင်အမာတွေ့ရှိရသည်။သို့သော်လည်း မြန်မာတွင်မဟုတ်ဖြစ်နေ၏။ဘယ်သူ့ကိုမှ မဲမထည့်လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးအဖြစ် Auto သတ်မှတ်မည်မှာအမှန်ဖြစ်၏။လူတိုင်းအသိ။
သို့သော် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမဲမပေးချင်၊မည်သူ့ကို ဘယ်လိုမဲပေးရမယ်မှန်းလည်းမသိပါက မဲရုံသို့သွားပြီး သေသေချာချာ ရှင်းပြခိုင်းပါ။မိမိမဲပေးချင်သော ပါတီမတွေ့ပါက မည်သို့သော စာရွက်စာတမ်းကိုမှ ဘောပင်နှင့်မရေးခဲ့ပါနဲ့။လုပ်ဇာတ်များ နှင့် ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ရလိမ့်မည်။
မှတ်ချက် ။ ။ သင့်ဘက်က မဲမပေးချင်တာကို ဘယ်သူမှအတင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။သင်သည် မဲရုံရောက်ပြီးမှ သင်မဲပေးမဲ့ ပါတီမပါခဲ့လျှင် မဲရုံအတွင်းမှ
ချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားနိုင်သည်။သင့်အား မည်သူမှ တားပိုင်ခွင့်မရှိ။
အထူးသတိပြုရန် ။ ။ သင်မဲမပေးချင်သည့်အချိန်နှင့် မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ။သင်သည် မည်သို့သော စာရွက်၊စာတမ်းများတွင် ဆိုင်းထိုးခြင်း၊မှတ်တမ်းရေးခြင်း
ရှင်းပြပါ ။ ။ သင်ဟာ မဲရုံအတွင်းမှ မဲမပေးပဲ ပြင်ပသို့ထွက်ခွာမည်ဆိုပါက မဲရုံလုံခြုံရေးအရ သူတို့က မေးမြန်လာပါက အမှန်အတိုင်းတာပြောပြလိုက်ပါ။ဥပမာ – မဲပေးလိုသော
ယခုအချိန်သည် သင်သာလျှင် သင့်နိုင်ငံအတွက် မျှော်လင့်ချက် မီးတပွင့်ဖြစ်၏။
နိုင်ငံအရေးသင့်အရေး ၊ နိုင်ငံလုပ်ရပ် သင့်လုပ်ရပ် ၊ နိုင်ငံရဲ့ရပ်တည်မှု သင့်ရွေးချယ်မှု။
သိပ်နားမလယ်ဘူး..။ ခမောက်ပါတီ နဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းပါတီ ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလည်း ..
ယူအက်စ်ရောက်မြန်မာတွေထဲက လှမ်းမေးလာတဲ့သူ၂ယောက်တော့ရှိတယ်.။ တရုတ်တန်းနဲ့ ကျောက်တံတား ကအမတ်လောင်းစာရင်းသိချင်တယ်တဲ့..။
ရှုပ်နေတာပဲ..မထည့်နဲ့လို့ပြောတော့ ..မထည့်လို့မရဘူးတဲ့..။ သံရုံးကသိနေတယ်တဲ့..။
88 မျိုးဆက်ကျောင်းသားပါတီက လိုဂို ဒေါင်းရုပ်နဲ့ကြယ်တွေပါတယ် ။
NLD ကလူတွေပြန်ဖွဲ့ထားတဲ့အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဆိုတာ ခမောက်ပုံပါ ။ ဒီနေ့မနက်ကလည်း တခါမှမမြင်ဖူးတဲ့လိုဂိုတစ်ခုတွေ့ရတယ် .. ကျားတဲ့… ငှက်လည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ် … အော် လိုချင်လိုက်တဲ့လွှတ်တော်အမှတ်လောင်းတွေ … ။ အခုဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ကျူရှင်ဆရာတွေကလည်း ၀င်ပြိုင်တယ် တကယ် အံ့သြလောက်တယ် ။ တိုင်းပြည်အတွက်ဝင်ပြိုင်ရတာပါလို့ ပြောတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်သန့်ရဲ့လား မသိဘူး ။ သူတို့က ပြိုင်တော့လည်း…. မဖြစ်မနေမဲပေးရတော့မှာပါ့…. ။
ခမောက်ကိုသာမဲပေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားပါတယ် ။
ရှင်းပြပါရစေ။မဲပေးပေး မပေးပေး ကျုပ်တို့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ကိုယ်ပိူင်မဲတွေဟာ ကြံ့ဖွတ်အတွက်အလိူအလျှောက်ဖြစ်မှာဘဲ။ ဒီတော့မဲမပေးမှကြံ့ဖွတ်မဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ မှားယွင်းပြီး သန်းရွှေထောင်ချောက်ထဲကျကြမဲ့ကိန်းဘဲ။ နဝတ နဲ့ သန်းရွှေကတော့လိမ်ညာမှာဘဲ။
မဲမပေးရင် ကြံ့ဖွတ်မဲဖြဲစ်မယ်။ မဲရုံမှာလူတယောက်မဲလာမပေးဘူးပေါ့။မဲရုံကမဲဆန္ဒရှင်ရာနှုံးပြည့်သပိတ်မှောက်မဲမပေးရင်၊ ဟုတ်ကဲ့ မဲတွေအားလုံးကြံ့ဖွတ်မဲဖြစ်မယ်။ သန်းရွှေကသုတာဝန်ကျေအောင်ကျိမ်းသေလိမ်မှာဘဲ။ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံ့းသပိတ်မှောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးကြံ့ဖွတ်မဲဖြစ်ပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာဘယ်မဲရုံမှလူမရှိ ဗလာမဲရုံနဲ့ သန်းရွှေဘယ်လိုအနိုင်ပိုင်းကြေငြာလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဒီနေ့ဟာကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကို တကမ္ဘာလုံးမီးမှောင်းထိုးထားတဲ့နေ့ဘဲ။အဲတာကြောင့်ကျုပ်တို့ပြည်သူလူထုလုပ်နိုင်တာတခုဘဲရှိတယ်။ပြည်လုံးကြွတ်သပိတ်မှောက်ကြပါစို့။
မင်းစားတဲ့ ထမင်း အစာကြေပါစေလို့ ဘဲ ငါ ဆန္ဒ ပြုလိုက်ပါတော့တယ်ကွာ
ပြည့်စုံခြင်း မပြည့်စုံခြင်းကတော့ မင်းရဲ့ အကြောင်းဘဲဖြစ်မှာပါ
ကိုယ့်မှာ အရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ပြည်သူတွေ ကိုယ့်ကို အားကိုးလာအောင် လုပ်ပေတော့နော်
သူခိုးငတက်ပြားဆိုတာလေ အစွမ်းတော့ထက်ပါရဲ့စောရနက္ခတ်နဲ့ကြုံလေတော့ သူခိုးကြီးလုံးလုံးဖြစ်ရှာတယ်လား
သိူခိုးသာပြောတာပါ လူတွေတော့ ချစ်ရှာသား
မင်းရဲ့ နက္ခတ်ကတော့ မင်းအမေကို မင်း
မင်းအဖေနဲ့ ရှယ်ယာပြန်ခွဲတဲ့ နက္ခတ်ကြီး ဖြစ်နေတော့
ငါလဲ ဖင်ပိတ်ပြီး ပြေးပြီဟေ့
ထွက်ပြေးသွားလို့တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်တော့ မထင်စေလိုပါဘူး
မိမိပစ္စည်း မိမိ တာဝန်ဆိုတဲ့အတိုင်း
ငါ့ဖင်ရဲ့ ကျမ္မာရေးကို ငါကိုယ်တိုင်သာ စောင့်ရှောက်ရမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ့ဖင်မှာ အကျင့်မရှိတဲ့အတွက်
ငါ့ကို နားလည်ပေးပါလို့ 
ပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကို ကယ်တင်နိုင်ပါစေ
ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
မဲမပေးဘဲ နေပြီး သပိတ်မှောက်နေတဲ့ လူတွေ များရင်.. နောင် အနှစ် ၂၀ ထပ်ပြီး ဥပဒေ ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကော.. အဲဒါလေး သိချင်တယ်.. အမြင်လေး ဖလှယ်ပါအုန်း
မဲပေးဖို့ လူမရှိလို့.. ပါယ်မဲ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရင်ကော..
ကိုတင်မိုသီ နဲ့ ကိုကြောင်ကြီးကို ထောင်ခံပါတယ် …….
ဘီလိုကြီးလဲ၊ ထောင်ခံပါတယ် ဆိုတာ၊
ကြံ့ဖွတ်ကလူတွေက သူ့မဲ သူထည့်မှာပဲ .. နောက်ဆုံး မကြိုက်ဖူး ဆိုတာကို မကြိုက်ကြောင်းပြတဲ့အနေနဲံ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို မဲပေးတာ ပိုကောင်းမလား .. နို့မဟုတ်ရင် .. ဆူး ထင်ထားသလို ဖြစ်မယ် မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ ဘယ်ပြောနိုင်ပါ့မလဲ .. ဘာပြောပြော .. အတိုက်အခံများများပါမှ ပွဲ စည်မယ် .. နို့မဟုတ်ရင် လက်ညှိုးထောင်မယ့် လူတွေချည်းပဲ တက်သွားမှာ စိုးတယ် ..
အဓိကကတော့ ကြံ့ ဖွတ်ကိုမဲမပေးကြဖို့ ပါပဲ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကြံ့ ဖိတ်ပါတီ
၀င်တွေကအလံပြောင်းလိုက်တဲ့ နေ့ ကထဲကသူတို့ နိုင်ပြီလို့ ပြောနေကြတယ်။
သူတို့ မနိုင်ဖို့ ပဲအရေးကြီးပါတယ်။အားလုံးပဲကြံ့ဖွတ်ကိုမဲမပေးကြပါနဲ့ ။
ကြံဖွတ်တော့ မဲမပေးပါဘူး.. သူတယောက်ထဲ ရှိရင်တော့ မဲကို လျောက်ခြစ်ပစ်မယ်.. သူအတွက် ထောက်ခံတဲ့ မဲ အဖြစ်တော့ မခံဘူး
လျှောက်ခြစ်ပစ်လဲ သူတို့ကတော့ အမှန်ပြန်ခြစ်ပြီး ထည့်ပေးမှာပဲ
ပေးလဲမပေးဘူး သွားလဲ မသွားဘူးဆို ရင်ကော ဗျာ
ကျွန်တော့အထင်ကတော့ မဲပေးသည်ဖြစ်စေ၊ မပေးပဲနေသည်ဖြစ်စေ၊ သူတို့က နိုင်ကိုနိုင်သွားမှာပါ။ဒီတော့ သူတို့နုင်သွားမဲ့ အတူတူ၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ဇာတ်ကြီးကို ၀င်ပြီးအားမပေးပဲ လက်ရှောင်လိုက်တာကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားပါတယ်။ အန်တီစု ကလဲ ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီမပါရှိဘူဆိုရင် မဲမပေးပဲနေနိုင်တယ် လို့ပြောထားတယ်။ ဒါအမှန်ပဲလေ။ ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ဆိုရင် ဒီလောက်တော့ လွတ်လပ်ရပေမပေါ့။
ပြီးတော့လဲ ခမောက် နဲ့ ခွပ်ဒေါင်း(၀င်အရွေးခံပါတီများ)တွေဟာ NLD ရဲ့ LOGOတွေကို အဆင်ပြေသလို အနီးစပ်ဆုံးခိုးချထားတဲ့ကောင်တွေပါ။ အန်တီစု၊ NLD ပါတီတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှမပတ်သတ်တဲ့ သာကူး၊သာရာစီးတွေပါ။
ပြောရရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေအားလုံးဟာ တိုင်းပြည်အတွက်လို့ဟစ်ကြွေးထားပေမယ့် အများစုကတော့ ကိုယ်ကြိုးရှာဖို့ သက်သက်၊နေရာတစ်နေရာ ရဖို့သက်သက်ပဲလို့မြင်မိပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ကျွန်တော့်အမြင်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်တော့ သူတို့ရိုက်မဲ့ ရုပ်ရှင်အတွက် ဇာတ်ညွန်းကရေးပြီးသားပါ။ ဇာတ်သိမ်းမှာ ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟာ အပြီးပါထားပြီးသားပါ။ ဒါရိုက်တာကလဲ ကြိုက်ပြီးသားပေါ့ဗျာ။ ဒါ့အပြင် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေလဲ ရွေးထားပြီးသားလေ။ ခု ၀င်ပြိုင်တဲ့ပါတီတွေက ဆိုက်ပတ် အဆ့င်ပါပဲ။ ကဲ
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ပရောဂ
မပါစေတော့ဘူးလို့တွေးတယ်ဗျာ။ အကယ်ရ်ျ ကျွန်တော်အတွေးချော်တယ် ဆိုရင်လဲ ပြောကြပါဦးဗျာ။
ဆူးရေ တွေးထားတာလေးလှတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်တွေကို မတော်လှန်နိုင်သရ်ျတော့ ဒီလိုပဲသူတို့လုပ်သမျှခံရမျာပဲလေ။ ဘယ်လိုလုပ်လုပ် သူတို့ပဲနိုင်မှာပဲလေ။ ဒီတော့ မဲမပေးပဲနေမလားလို့ကျွန်တော်တော့ စဉ်းစားထားတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တွေးတာမှားတယ်ဆိုလဲ ပြောပါဗျာ။
ဒီစာလေးတွေနဲ့ကိုယ့်အမြင်သူ့အမြင်လေးတွေကို ဖလှယ်ကာ ပြောကြားပေးကြတဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သက်ကိုလည်း အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဒီလိုမျိုး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကို မိမိဘက်က သိသလောက်တတ်သလောက် ဆွေးနွေးပေးသူများအားလုံးကို ထပ်မံကာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံအရေးကို အလေးပေး အားထားကြတဲ့အတွက်ကြောင့် မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကို ဦးဆောင်ပေးနိုင်မဲ့ လူတွေပေါ်ပေါက်လာစေဗျာ………….။ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသည် တခြားသော တိုင်းတပါးနိုင်ငံတွေထပ် ပိုမိုထူးခြား အောင်မြင်ကျော်ကြားရမည်။
ပါတီတွေကသူတို့ကိုမဲပေးပါမဲပေးပါ ပဲပြောပြောမဲဆွယ်နေကြတယ် တကယ်မဲပေးနကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတကယ်လေးစားကြရဲ့လား ဆိုတာပါတီခေါင်းဆောင်တွေစည်ရုံးရေးမှုးတွေပြည်သူလွှတ်တော် အမတ်တွေကျနော်ကို ဒီမိုကရေစီတွေပြောနေမယ့် အစားအမျိုးသာပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကိုဒီမိုကရေစီထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်
မဲမထည့်ရင် ကြံ့ဖွံ့အလိုအလျောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်တန်ဘူးထင်တယ်။ကျုပ်တို့သိသလောက်တော့ပြောရရင် တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုနားလည်ပေးရမယ်ထင်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ပြသရမှာပဲ…
ဘယ်လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မူတွေနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မလဲ…ရှေ့မှလမ်းပြ ခေါ်ဆောင်ဖို့လိုနေပြီ…